‘नाई नभन्नु ल ५’को फस्टलूकमा को-को अटाए ? « Ramailo छ
‘नाई नभन्नु ल ५’को फस्टलूकमा को-को अटाए ?
विकासराज आचार्यको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म ‘नाई नभन्नु ल ५’को फस्टलूक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । पोस्टरमा स्वस्तिमा खड्का र डेब्यु व्वाय अभिषेक नेपालको जोडी प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै बालकलाकार अनुभव रेग्मीको जोडी सेड्रीना शर्मासँग सुहाएको छ ।
भदौ ८ गते प्रदर्शन हुने फिल्ममा प्रियंका कार्की, दीलिप रायमाझी, निरुता सिंह, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का, बुद्दी तामाङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्ममा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाँकन र बसन्त सापकोटाको संगीत छ ।